Umhla My Pet » Ezine Common Ulwalamano Iingxaki
ukubuyekezwa: Nov. 20 2020 | 3 min ukufunda
Uthando yinto eningenakukholwa yiyo loo! Ntombikayise isizathu sokuba sichitha isiqingatha ubomi bethu uzama ukufumana umntu. Kodwa xa sisenza oko kuphela isiqingatha ibali. Simelwe ukuba iingxaki zethu endleleni nangayiphi lwalamano kodwa kukho iindlela ukuzama ukusombulula ezi iqheleke gqitha ngemiba sijongene. Khumbula ukuba ekupheleni kosuku wena kubuhlakani ukuba akukho nanye kwezi ngxaki inkulu ngaphezu koko ke ndawonye ngoko ngokwenene into ekhethekileyo. Silwele kubambelela kuyo. Nantsi ngxaki ezine zokuba abantu abajamelana ubudlelwane kwaye mhlawumbi kuzisombulula njani.
mhlawumbi unxibelelwano ingxaki lwalamano eqhelekileyo kukho. Kukho imiba emininzi kangaka ekungayi kuvela ukuba kubudlelwane apho abantu ababini kwiphepha elinye xa kuthelekiswa ukuba abantu abangekho. imiqobo kunxibelelwano siyeke ekuthinteleni iimeko esiba makhulu kunye nezintsonkothileyo ngaphezu ngokwenene ukuba. Ukuba wena neqabane lakho kufumanisa ukuba ezi imiqobo kulwalamano lwakho indlela ukuthetha oku evulekileyo, ngentliziyo ne non-uzenza. Uninzi komlilo wongezwa amafutha kwezi meko iphuma kukungabi ukuqonda phakathi kwabantu ababini nokwenza yoko nezigwebo loo mntu ngaphandle ukuphulaphula kwicala labo ibali. Zama ukuhlala phantsi uze uthethe, thetha, thetha.
Efuna Izinto ezahlukeneyo
Enoba izinto ezincinci ezifana ukuya apho phandle, phi ukutya, etc … okanye imiba ezinkulwana ubomi apho, ukuba bahlale ndawonye okanye ukutshata okanye ukuba ingaba abantwana okanye engafuni izinto ezahlukeneyo yingxaki ubudlelwane enkulu. Kwaye kuya kwenzeka ngendlela enye okanye omnye kuba nangona sibanye xa loo mntu ezikhethekileyo ebomini bethu sisese abantu inkqubo yethu yokucinga kunye nezicwangciso indlela sibona ubomi bethu bevelisa. Oku kwenza ukukhuhlana kuba sibona njengokuba uthatha oko sifuna ukuba zigcinwe thina badla gatyeni kubo lo. Yintoni ekufuneka ukuba uyenze ukuthetha kwakhona, kodwa kufuneka naye lo abe nentlonelo kuba oko bafuna, umzk. kakhulu abantu abafuna ukutshata ucinga ukuba umtshato nesetyenzwe ngendlela efanelekileyo ngaphezu ukuphila kunye apho umntu ofuna ukuhlala ndawonye ke musa ukubona izinto ezifana ukuba. Ngamanye amazwi, ufuna izinto ezahlukeneyo, hayi “ngcono” izinto ekufuneka kukhunjulwa okanye kungenjalo abantu bazive ukuba sityeshele okanye ekucinezeleni indlela abacinga ilungile. Compromise kwakhona key apha. Ufuna oku lwalamano. Nje ukuqinisekisa ukuba imali ngokulinganayo oluye lwenziwa nganye iindawo zakho.
Imali yingcambu yazo zonke iintlobo zobubi njengoko bathi kunye nobudlelwane kunokuba netyhefu egcina nokupheka. Siphila kumaxesha recessional kunye imisebenzi azifumaneki rhoqo. Abantu nzima kwaye Unokuyifaka ubunzima kulwalamano lwakho o kwemvelo kuphela. Yintoni ekufuneka ukuba uyenze sakhuthazana, ukubonisa amanye uyakholelwa omnye komnye yaye kunye unako ukuza ngaphandle kwelinye icala kuba ekugqibeleni uya. Kodwa okwangoku kukuxoxa umntu uyamthanda abaninzi ehlabathini akayi ukusombulula nantoni. Ukuba nto iza kwenza kuphela izinto amaxesha aliwaka ngakumbi.
utywala Bangamakhoboka & ukudakumba
Le yimiba enzima ukuba umntu ukwazi ntoni xa balinde iqabane zazo ebbs baphelelwe ezifana. Ubomi kakhulu bonke ngeendlela ezahlukeneyo, kwaye abanye abantu bamelane ngcono kunabanye. Yintoni ekufuneka ukuba uyenze kubakho kubo, ubabonise unokholo ukutsala ngalo kwaye musa ukuthi amagqabaza ukhuphe umphezulu zentloko yenu leyo eya kubenza ngakumbi phantsi kunabo bayiyo.
12 Tips Ukuze Hlala yimincili Xa Ukuthandana umxokozelo
Imfihlelo ngokumanga Great